Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Na UL China Manufacturer
Nkọwa:Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ,Mkpụrụ Mkpụrụ Na-arụkọ na UL,Igwe ọkụ na UL
Home > Ngwaahịa > Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > Ihe eji emepụta ihe eji emepụta ihe > Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Na UL
Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Na UL
Ihe Nlereanya.: F037-7
Ihe Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Na-eme ihe na-agba nri na CE Europe, UL North America, na ụlọ ọrụ ụfọdụ na Russia na Japan.
Mkpụrụ ọkụ na-amị mkpụrụ maka ka eto eto na mkpụrụ osisi germination
Ebe mgbanyụ ọkụ na-agbanye mgbatị dị mita 10 ruo 20 karịa okpomọkụ
Na-eme ka ihe ịga nke ọma nke seedlings na cuttings, mmegide na-ewu, mmiri na-adịghị ọcha ma dị mfe nhicha
Enwere ike itinye ya n'ọtụtụ nha dị iche iche nke potter potted.
Bịa na ike Adapter nke dabara na mba gị hụrụ n'anya
size: 200 * 300MM, ahaziri dị
elekere: 16W , ahaziri aha
Iji Mkpụrụ Starter Heat Mat:
1. Biko Chọta ebe dị ala, nke dị ala nke nha kwesịrị ekwesị maka ihe ọkụ ọkụ gị,
na-ezere ala oyi, ha ga-egbochi ike ikpo ọkụ nke ọkụ ọkụ.
2. Biko gbanye igwe eletrik ọkụ na teepu 120V.
3. Biko tinye belt mgbasa ma ọ bụ ihe ọkụkụ ọzọ dị na tebụl ọkụ. Maka nsonaazụ kacha mma, kpuchie seedlings / cuttings na dome iru mmiri.
1. Biko ekwela ka ihe ọkụ na-acha ọkụ na-agbanye mmiri ma ọ bụ mmiri ọ bụla ọzọ.
2. Biko etinyela ọkụ ọkụ na ma ọ bụ n'okpuru ihe ọ bụla ọkụ, ọkụ ma ọ bụ mkpuchi ngwaọrụ.
3. Biko etinyela okpukpu ọkụ n'elu ebe o siri ike ma ọ bụ kwupụta ya, ebe nke a nwere ike imebi ya.
Anyị nwere ekele maka mmasị gị na ngwaahịa anyị. Biko nye anyi ndụmọdụ n'okpuru Ama. maka amaokwu anyị ma kpọtụrụ anyị ka ịchọta ihe ngwọta kacha mma gị.
Pet ụlọ PTC okpomọkụ mpe mpe akwa Kpọtụrụ ugbu a
Hydroponic Mkpụrụ Mkpụrụ Na-ada Mkpụrụ Na-amalite Mmiri Ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
okpokoro okpukpo osisi na oyi Kpọtụrụ ugbu a
Okpomọkụ chara chara na-agafe UL CE Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ka okpomoku na UL Kpọtụrụ ugbu a
Pet PTC na-ekpo ọkụ na UL CE Kpọtụrụ ugbu a
Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Na-arụkọ na UL Igwe ọkụ na UL Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Cassia Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Ọkụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Nri Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ